Maitiro Ekumhanyisa 32-Bit Zvishandiso pane 64-Bit Fedora | Kubva kuLinux
Maitiro Ekumhanyisa 32 Zvishoma Zvishandiso pane 64 Bit Fedora
Mhoro shamwari, panguva ino ndinoda kukuratidza maitiro ekuisa raibhurari yekumhanyisa 32-bit zvirongwa pane 64-bit system kana iwe uri kushamisika kuti chingave chinobatsira chii muXAMPP. Izvo zvinotibvunza raibhurari yekumhanyisa pane 64-bit system. Zvakanaka, tanga kushanda.
Chinhu chega chatinofanirwa kuita kuisa makodhi anotevera muTerminal.
Para Debian ndine aya macode.
Uye kugadzirira neizvozvo zvingave zvese. Luck!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Maitiro Ekumhanyisa 32 Zvishoma Zvishandiso pane 64 Bit Fedora
zvakanaka chaizvo kushaikwawo
sudo dpkg -add-kuvaka i386
Wedzera iyo 32-bit repo uye voila, unogona ikozvino kumhanya chero 32-bit application pane 64-bit kernel.
[chenjedzo] 32-bit zvishandiso hazvigoni kubatana pamwe ne64-bit, nekudaro kuyedza kuisa imwe kuchabvisa imwe [/ yambiro]
Iyo yekupedzisira harisi dambudziko nekuti isu tiri kuzongoshandisa rimwe boka rezvikumbiro senge winmodems madhiraivha ayo anomhanya chete makumi matatu nemaviri, nezvimwe. Mune ino kesi, zvinodikanwa kumisikidza iyo 32-bit kernel misoro inogara pamwe chete neiyo 32-bit idzo.
Zvinondipa kwete. Dpkg inongopindirana chete neDebian uye zvigadzirwa.
Tisati tatengesa mudhudhudhu uye tichinyengedza vashandi, tinofanirwa kuzvizivisa pachedu zvishoma.
Dai iwe waive waverenga chimwe chinhu chisiri icho musoro, iwe waizoona icho chichireva, izwi neshoko.
«YaDebian ndakawana aya makodhi.
sudo apt-tora kuisa ia32-libs »
Izvo chaizvo zviri kutaurwa naBishopWolf pamusoro.
Izvi zvakafanana zvinofanirwa kushanda kune yako nyaya.
Ini ndinofunga ndaifanirwa kudoma kuti ini ndinoshandisa Debian uye yangu yapfuura komendi yaive yakagadzirirwa vaDebian nevashandisi vanobva. Zvakanaka ini ndinofunga vakatopindura izvi
Muchiitiko changu zvave zviri nyore, ini ndinongoisa iyo 32-bit vhezheni uye yum inogadzirisa zvinoenderana otomatiki (kusanganisira maraibhurari makumi matatu nemaviri)
Hongu, asi, iwe unenge uine chete x86 [32Bits] system, poindi yacho inenge iri yekuve nex64 base wozomhanya makumi matatu nemaviri-maapp. Iwe unogona kuve ne32Bits pamwe neKernel PAE yekuwedzera HW kuzivikanwa kana iwe uine PC yemazuva ano.
Kazhinji, sekuziva kwandinoita x64 inopa hukuru hunogona kupfuura 32Bits uye ndigadzirise kana ndakanganisa!
PS: MRGERSON, Ndatenda nezano!
Zvakakodzera, iwe uchagara muF17 kusvikira vapedza kuitsigira kana iwe haudi iyi vhezheni itsva, ikozvino F18?
Hongu, kugona kukuru, kugona kunongokushandira iwe kana ukabata dhata hombe (mutambo, server, graphic dhizaini nezvimwewo), kana uchingova kubhurawuza, kuita chirongwa chebasa, kutumira mukati kubva kuLinux, nezvimwe, 32 zvinokwana iwe, newe Iwe unochengetedza yakawanda yekushandisa simba uye izvo zvinokanganisa iyo nguva yemaminetsi ebhatiri mune laptop.
Iyo dhizaini nemafungiro ndinoziva kuti iyo nguva yebhatiri inoenderana neiyi kubva pakukwirira kwekushandisa iwo mutoro wakawanda wePC, asi, pachangu ini ndashandisa zvese zvivakwa uye mune zvangu maitiro bhatiri rinotora nguva shoma shoma kupfuura kushandisa Windows, Izvo, muWindows ndinofamba nemwenje weiyo yakatungamira kuzere kutamba mimwe mitambo kuAEO II nevamwe uye ini ndinonzwa kuti bhatiri rinogara kwenguva yakareba kupfuura kushandisa Linux.
Hongu, mune zvese ini ndinoshandisa linux kana ese masisitimu emunda wepurogiramu nezvimwe.
Iko kudzokorodza kernel maererano nehupenyu hwebhatiri kunowanzoitika muLinux uye zvinosuwisa zvinoita sekunge ivo havana kupihwa kukosha kwavanofanira. Ini ndinorangarira kuti iko kwekutanga kucherechedzwa kudzokororwa kwakataurwa mune kernel 2.6.38 kana ndikarangarira nemazvo uye yaive yakagadziriswa- mune dzidziso- mushanduro 3.2! asi neshanduro yega yega nyowani ndakaona kuti bhatiri rangu rinogara zvishoma sei. Ini handina kana basa nazvo zvekare, nekuti ini ndinowanzo shandisa iko kwese kuuya kwaKristu. Uye harisi bhatiri chete, zvakajairikawo kuona kupisa kwakanyanya mumaprosesa, disks uye mifananidzo, pamwe nemhedzisiro yavanogona kuve nayo pamakomputa edu.
Semunhu asiri wehunyanzvi mushandisi netsoka, chinhu choga chandinogona kupa imibhugi mitsara…. Netariro -haisi kukwirira zvakanyanya- zvekuti ichagadziriswa. Ndozvazvakaita iyo penguin system.
st0rmt4il, ndichagara kusvikira rutsigiro rwapera asi kungoita usimbe, handina kuyedza vhezheni 18.
LOL .. Zvinoenderana newe murume, ndinovimba uye neiyo nyowani F19 gadzirisa uye ita kuti inosimudza inakidze .. Kune vamwe vese ndinoiona zvakanaka 😀
Usatisarure isu Arch:]
"KwaDebian ndawana macode aya."
Wakawaneiko iwo makodhi!?
Ndiudze, iwo "makodhi" aunofanira kunyoresa yakazara OS kana kuva nehupenyu husingaperi mumutambo mudiki?
[How To] Chinja kupenya kweLaptop muLinux